Fanantenana Azo Antoka Momba An’ireo Havanao Efa Maty | Ampianarina
Fanantenana Azo Antoka Momba An’ireo Havanao Efa Maty
Ahoana no ahafantarantsika fa tena hitsangana ny maty?
Inona no manaporofo fa tena te hanangana ny maty i Jehovah?
1-3. Inona ny fahavalo manenjika antsika rehetra, ary inona no fanantenana omen’ny Baiboly momba izany?
ERITRERETO hoe mandositra fahavalo masiaka be ianao. Matanjaka be izy sady mahery mandeha noho ianao. Fantatrao hoe tena ratsy fanahy izy, satria efa hitanao namono ny namanao sasany. Efa mba mandositra araka izay fara herinao ihany ianao, nefa hoatran’ny tsy maintsy ho tratrany ihany. Tampotampoka eo anefa dia iny misy olona tonga hanavotra anao. Matanjaka lavitra noho ilay fahavalonao izy, sady mampanantena hanampy anao. Maivamaivana erỳ ianao!
2 Azo lazaina hoe enjehin’ny fahavalo toy izany ianao. Isika rehetra mihitsy no enjehiny. Efa hitantsika fa antsoin’ny Baiboly hoe fahavalo ny fahafatesana. Tsy misy maharesy azy isika. Betsaka tamintsika no efa nahita azy io namono ny havantsika. Matanjaka lavitra noho ny fahafatesana anefa i Jehovah. Izy ilay Mpanavotra tena tia antsika. Efa noporofoiny fa maharesy ny fahafatesana izy. Mampanantena koa izy fa hanafoana tanteraka an’io fahavalo io. Hoy ny Baiboly: “Hofoanana ny fahafatesana, izay fahavalo farany.” (1 Korintianina 15:26) Tena vaovao tsara izany!
3 Hojerentsika aloha hoe inona ny vokany amintsika rehefa misy havantsika maty. Amin’izay mantsy hazava tsara amintsika ilay fampanantenan’i Jehovah hoe ho velona indray ny maty. (Isaia 26:19) Afaka manantena isika fa hatsangana amin’ny maty izy ireo.
4. a) Nahoana no manampy antsika hamantatra an’izay tsapan’i Jehovah ny zavatra tsapan’i Jesosy rehefa nisy maty? b) Iza no lasa tena naman’i Jesosy?
4 Efa nisy havanao maty ve? Nila tsy ho zakanao angamba ny alahelonao sy ny fahorianao tamin’izay. Mila mandinika ny Tenin’Andriamanitra isika amin’ireny fotoana ireny, mba hampionona antsika. (Vakio ny 2 Korintianina 1:3, 4.) Ao mantsy no ahalalana ny fihetseham-pon’i Jehovah sy Jesosy rehefa misy maty. Mitovy amin’izay tsapan’i Jesosy ny zavatra tsapan’i Jehovah, satria nanahaka ny toetran’i Jehovah izy. (Jaona 14:9) Nalahelo be i Jesosy rehefa maty ny olona akaiky azy, ary manaporofo an’izany ity tantara ity. Rehefa nankany Jerosalema izy, dia fanaony ny nankany Betania, tanàna tsy lavitra teo, mba hitsidika an’i Lazarosy sy Maria ary Marta, izay mpiray tam-po. Lasa mpinamana be izy ireo, satria hoy ny Baiboly: “Tia an’i Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy i Jesosy.” (Jaona 11:5) Maty anefa i Lazarosy, araka ny hitantsika tany aloha.
5, 6. a) Inona no tsapan’i Jesosy rehefa nahita ny havan’i Lazarosy sy ny namany nalahelo be? b) Nahoana no mampahery antsika ny mahalala fa nalahelo i Jesosy?
5 Inona no tsapan’i Jesosy rehefa maty ilay namany? Niara-nalahelo tamin’ny havan’i Lazarosy sy ny namany izy. Nampihetsi-po be an’i Jesosy ny nahita azy ireo. “Nalahelo mafy i Jesosy tao am-pony tao sady ory dia ory”, ka ‘nirotsaka ny ranomasony.’ (Jaona 11:33, 35) Tsy nidika anefa izany hoe tsy nanana fanantenana izy. Fantany mantsy fa hanao fahagagana izy. (Jaona 11:3, 4) Na izany aza, dia tsapany fa tena fahoriana izany hoe misy maty izany.
6 Mampahery antsika ny mahalala fa nalahelo i Jesosy. Hita amin’izany mantsy fa mankahala ny fahafatesana izy sy Jehovah Rainy. Mahavita mandresy tanteraka an’io fahavalo io anefa i Jehovah. Hojerentsika hoe inona no vitan’i Jesosy, noho ny hery nomen’Andriamanitra azy.
7, 8. Nahoana no hoatran’ny hoe tsy nisy azo nantenaina intsony ny amin’i Lazarosy, nefa inona no nataon’i Jesosy?
7 Nalevina tao amin’ny lava-bato iray i Lazarosy, ka nasain’i Jesosy nesorina ny vato nanampenana an’ilay izy. Tsy nanaiky anefa i Marta, satria efa efatra andro izy no maty, ka efa nanomboka simba ilay faty. (Jaona 11:39) Hoatran’ny tsy nisy azo nantenaina intsony tamin’izay.
Faly be ny olona rehefa natsangana tamin’ny maty i Lazarosy.—Jaona 11:38-44
8 Nesorina ihany ilay vato, ary niantso mafy i Jesosy hoe: “Ry Lazarosy, mivoaha!” Inona no nitranga? “Nivoaka ilay lehilahy efa maty.” (Jaona 11:43, 44) Azo antoka fa tena faly izay nahita an’izany. Samy nahafantatra daholo ny iray tam-po taminy, ny havany, ny namany, ny mpiray tanàna taminy hoe efa maty izy. Velona indray anefa izao ilay olona tian’izy ireo. Hoatran’ny tsy nampino ilay izy. Azo antoka fa betsaka no namihina an’i Lazarosy sady faly. Resy tokoa ny fahafatesana tamin’izay!
Natsangan’i Elia tamin’ny maty ny zanakalahin’ny mpitondratena iray. —1 Mpanjaka 17:17-24
9, 10. a) Inona ny porofo fa tsy ny herin’i Jesosy no nananganany an’i Lazarosy? b) Nahoana no mahafinaritra ny mamaky ny tantaran’ireo olona natsangana tamin’ny maty, ao amin’ny Baiboly?
9 Tsy nilaza i Jesosy hoe ny heriny no nahavitany an’iny fahagagana iny. Nivavaka mantsy aloha izy vao niantso an’i Lazarosy, ka nasehony tsara hoe i Jehovah no tena manangana ny maty. (Vakio ny Jaona 11:41, 42.) Tsy vao tamin’io i Jehovah no nampiasa ny heriny mba hananganana ny maty. Olona sivy no tantarain’ny Baiboly hoe efa natsangana tamin’ny maty, ary iray monja amin’izany i Lazarosy. * Mahafinaritra be ny mamaky sy mianatra an’ireny tantara ireny. Hita hoe tsy manavakavaka Andriamanitra, satria efa natsangany daholo na ankizy na olon-dehibe, na lahy na vavy, na Israelita na tsy Israelita. Hita koa fa faly be ny havan’ireo olona natsangana. Tamin’i Jesosy nanangana ankizivavy kely iray, ohatra, dia “faly tsy nisy hoatr’izany” ny ray aman-dreniny. (Marka 5:42) Tena tsy hohadinoin’izy ireo mihitsy iny zavatra nataon’i Jehovah iny.
Natsangan’ny apostoly Petera tamin’ny maty ilay vehivavy kristianina atao hoe Dorkasy. —Asan’ny Apostoly 9:36-42
10 Mbola maty ihany, tatỳ aoriana, ny olona natsangan’i Jesosy. Tsy midika anefa izany hoe tsy nisy dikany ny nananganana azy ireny. Hita amin’ireny mantsy fa tena marina ny zavatra ampianarin’ny Baiboly momba ny maty, sady manome fanantenana.
11. Nahoana ny tantaran’i Lazarosy no manaporofo fa marina ny voalazan’ny Mpitoriteny 9:5?
11 Milaza ny Baiboly fa “tsy mahalala na inona na inona” ny maty. (Mpitoriteny 9:5) Tsy mahatsiaro tena izy ireo, ary tsy hoe velona any ananonanona any. Manaporofo an’izany ny tantaran’i Lazarosy. Rehefa velona indray izy, dia tsy nitantara hoe nahafinaritra be ny fiainana tany an-danitra, na hoe nampijalijaly be ny tany amin’ny afobe. Tsy milaza an’izany ny Baiboly. ‘Tsy nahalala na inona na inona’ kosa i Lazarosy, nandritra ny efatra andro nahafatesany. Natory tao amin’ny fahafatesana fotsiny izy.—Jaona 11:11.
12. Nahoana no azontsika antoka fa tena natsangana tamin’ny maty i Lazarosy?
12 Hita amin’ny tantaran’i Lazarosy koa fa tena misy ny fitsanganan’ny maty, fa tsy hoe angano. Be dia be ny olona nanatri-maso teo, tamin’izy natsangana. Na ny mpitondra fivavahana tsy tia an’i Jesosy aza tsy nanda hoe nisy io fahagagana io. Hoy kosa izy ireo momba an’i Jesosy: “Inona no hataontsika, fa manao famantarana maro iny lehilahy iny?” (Jaona 11:47) Betsaka ny olona nandeha nijery an’i Lazarosy taorian’izay, ka vao mainka maro no nino an’i Jesosy. Rehefa nahita an’i Lazarosy izy ireo, dia niaiky fa nirahin’Andriamanitra tokoa i Jesosy. Tena tsy azo nolavina io porofo io, ka nitady hamono an’i Jesosy sy Lazarosy mihitsy ny mpitondra fivavahana jiosy sasany.—Jaona 11:53; 12:9-11.
13. Nahoana isika no mino fa tena afaka manangana ny maty i Jehovah?
13 Sarotra inoana ve hoe afaka ny ho velona indray ny olona efa maty? Tsia, satria nilaza i Jesosy fa hatsangana ny olona “rehetra any am-pasana.” (Jaona 5:28) I Jehovah koa no Mpamorona ny zavamananaina rehetra. Dia tsy ho vitany ve ny hamorona azy ireo indray? Afaka mitadidy an’ireo havantsika efa maty izy. Ny kintana tsirairay aza omeny anarana, nefa an-tapitrisa tapitrisany ny isan’izy ireny. (Isaia 40:26) Tadidin’i Jehovah amin’ny an-tsipiriany àry ny havantsika efa maty, ary vonona hanangana azy ireo izy.
14, 15. Nahoana ny tenin’i Joba no manome toky antsika fa tena maniry hanangana ny maty i Jehovah?
14 Milaza ny Baiboly fa tena maniry hanangana ny maty i Jehovah. Hoy ilay lehilahy tsy nivadika atao hoe Joba: “Raha maty ny lehilahy tomady, dia ho velona indray ve izy?” Nilaza izy fa hiandry ao am-pasana izy, mandra-pahatongan’ny fotoana hahatsiarovan’Andriamanitra azy. Hoy izy tamin’i Jehovah: “Hiantso ianao, dia hamaly anao aho, satria haniry mafy hahita ny asan’ny tananao ianao.”—Joba 14:13-15.
15 Eritrereto ange izany e! Tena maniry mafy hamelona an’ireny maty ireny indray i Jehovah. Tsy mampahery anao ve izany? Iza anefa no hatsangana amin’ny maty, ary ho aiza izy ireo avy eo?
“IZAY REHETRA ANY AM-PASANA”
16. Hanao ahoana ny fiainana rehefa hatsangana ny maty?
16 Ahalalantsika zavatra betsaka momba ny fitsanganan’ny maty amin’ny hoavy ny tantaran’ireo olona natsangana tamin’ny maty ao amin’ny Baiboly. Teto an-tany ihany, ohatra, izy ireo no natsangana ka afaka niaraka tamin’ny havany indray. Hoatr’izany koa no hitranga amin’ny hoavy, saingy ho tsara kokoa. Nianarantsika tao amin’ny Toko faha-3 fa hataon’Andriamanitra paradisa ny tany manontolo. Tsy hisy intsony àry ny ady sy heloka bevava ary aretina, rehefa hatsangana ny maty. Ho afaka hiaina amim-pilaminana eto an-tany sy ho sambatra mandrakizay izy ireo.
17 Iza no hatsangana amin’ny maty? Nilaza i Jesosy fa ‘handre ny feony izay rehetra any am-pasana, dia hivoaka izy ireo.’ (Jaona 5:28, 29) Hoy koa ny Apokalypsy 20:13: “Ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana namoaka ny maty tao aminy.” Ny “Fasana” resahina eo, dia ny fasana misy ny maty rehetra. (Jereo ny Fanazavana Fanampiny, “Inona no Atao hoe Sheola sy Hadesy?”) Tsy hisy na inona na inona intsony ao anatin’io fasana io amin’ny hoavy, satria ho velona indray ny olona an’arivony tapitrisa natory tao. Hoy ny apostoly Paoly: “Hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina.” (Asan’ny Apostoly 24:15) Inona ny dikan’izany?
Hatsangana ny maty, ao amin’ny Paradisa, ka hihaona indray amin’ny havany
18. Iza ireo “marina” hatsangana amin’ny maty, ary nahoana izany no mampahery anao?
18 Anisan’ny “marina” ny ankamaroan’ny olona resahin’ny Baiboly, izay velona talohan’ny nahatongavan’i Jesosy teto an-tany. Ohatra hoe i Noa, Abrahama, Saraha, Mosesy, Rota, ary Estera. Resahin’ny Hebreo toko faha-11 ny sasany amin’ireo lehilahy sy vehivavy nanam-pinoana ireo. Anisan’ny “marina” koa anefa ny mpanompon’i Jehovah maty amin’izao fotoana izao. Tsy matahotra ny ho faty àry isika, satria manantena fa hatsangana amin’ny maty.—Hebreo 2:15.
19. Iza ireo “tsy marina”, ary inona no havelan’i Jehovah hataon’izy ireo?
19 Ahoana kosa ny amin’ireo olona rehetra tsy nanompo an’i Jehovah na tsy nankatò azy, satria tsy nahafantatra azy mihitsy? Ireny no antsoina hoe “tsy marina.” Tsy hohadinoina koa ireny olona an’arivony tapitrisa ireny, fa hatsangana amin’ny maty. Homena fotoana izy ireny mba hianarany momba an’ilay tena Andriamanitra sy hanompoany azy. Havela hisafidy izy ireo raha tiany ny ho anisan’ny mpanompon’i Jehovah tsy mivadika etỳ an-tany. Tena hahafinaritra ny fiainana amin’izay! Antsoin’ny Baiboly hoe Andro Fitsarana izany fotoana izany, izay haharitra arivo taona. *
20. Inona no atao hoe Gehena, ary iza no mankany?
20 Tsy midika anefa izany hoe hatsangana daholo ny maty rehetra tsy an-kanavaka. Milaza mantsy ny Baiboly fa any amin’ny “Gehena” ny maty sasany. (Lioka 12:5) Anarana toerana fanariam-pako tany ivelan’i Jerosalema fahiny ilay hoe Gehena. Nodorana tany ny faty sy ny fako. Noheverin’ny Jiosy ho tsy mendrika ny halevina sy hatsangana izay faty nariana tany. Mety tsara àry raha antsoina hoe Gehena ny fandringanana mandrakizay. Na dia voatendry hitsara ny velona sy ny maty aza i Jesosy, dia i Jehovah no tena hanapa-kevitra hoe iza no hatsangana sy tsy hatsangana. (Asan’ny Apostoly 10:42) Tsy hatsangan’i Jehovah mihitsy izay heveriny fa ratsy fanahy sy tsy mety miova.
FITSANGANANA HO ANY AN-DANITRA
21, 22. a) Inona ny karazana fitsanganana hafa resahin’ny Baiboly? b) Iza no voalohany natsangana ho lasa fanahy?
21 Miresaka karazana fitsanganana amin’ny maty hafa koa ny Baiboly. Lazainy ao fa misy olona hatsangana mba ho lasa fanahy any an-danitra. Ohatra iray amin’izany ihany no tantarain’ny Baiboly, dia i Jesosy Kristy.
22 Rehefa maty i Jesosy, dia tsy hoe navelan’i Jehovah hijanona tao am-pasana fa natsangany. (Salamo 16:10; Asan’ny Apostoly 13:34, 35) Tsy olombelona intsony anefa izy rehefa natsangana. Nilaza ny apostoly Petera fa ‘nofo i Kristy rehefa novonoina, fa fanahy kosa rehefa novelomina.’ (1 Petera 3:18) Tena fahagagana be izany! Velona indray i Jesosy sady lasa fanahy tena mahery. (Vakio ny 1 Korintianina 15:3-6.) Izy no voalohany natsangana ho lasa fanahy, nefa mbola hisy olon-kafa koa hatsangana hoatr’izany.—Jaona 3:13.
23, 24. Iza ireo “ondry vitsy”, ary firy ny isany?
23 Fantatr’i Jesosy fa kely sisa izy dia hiakatra any an-danitra. Nilaza tamin’ny mpianany tsy nivadika àry izy fa “hanomana toerana” ho azy ireo. (Jaona 14:2) Nantsoiny hoe “ondry vitsy” ny olona mankany an-danitra. (Lioka 12:32) Firy ny isan’ireo Kristianina tsy mivadika ireo? Hoy ny apostoly Jaona ao amin’ny Apokalypsy 14:1: “Hitako ny Zanak’ondry [Jesosy Kristy] nitsangana teo amin’ny Tendrombohitra Ziona, ary nisy efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy niaraka taminy, nanana ny anaran’ny Zanak’ondry sy ny anaran’ny Rainy voasoratra teo amin’ny handrin’izy ireo.”
24 Hatsangana ho any an-danitra ireo Kristianina 144 000 ireo, anisan’izany ny apostolin’i Jesosy tsy nivadika. Rahoviana izy ireo no hatsangana? Mandritra ny fanatrehan’i Kristy, hoy i Paoly. (1 Korintianina 15:23) Mbola hianarantsika ao amin’ny Toko faha-9 fa amin’izao androntsika izao io fotoana io. Vitsy sisa no mbola velona amin’ireo 144 000 ireo, ary hatsangana avy hatrany ho any an-danitra izay maty amin’izy ireo amin’izao androntsika izao. (1 Korintianina 15:51-55) Hatsangana mba hiaina ao amin’ny Paradisa eto an-tany kosa ny ankamaroan’ny olona maty.
25 Handresy ny fahafatesana tokoa i Jehovah, ka tsy hisy intsony mandrakizay io fahavalontsika io. (Vakio ny Isaia 25:8.) Mety hieritreritra anefa ianao hoe: ‘Inona no hataon’ireo hatsangana ho any an-danitra?’ Ho anisan’ireo hanjaka ao amin’ilay Fanjakana any an-danitra izy ireo. Hianarantsika ao amin’ny toko manaraka ny momba an’io Fanjakana io.
^ feh. 9 Hita ato amin’ireto ny tantara hafa: 1 Mpanjaka 17:17-24; 2 Mpanjaka 4:32-37; 13:20, 21; Matio 28:5-7; Lioka 7:11-17; 8:40-56; ary Asan’ny Apostoly 9:36-42; 20:7-12.
^ feh. 19 Raha mahaliana anao ny atao hoe Andro Fitsarana sy hoe inona no hitsarana ny olona, dia jereo ny Fanazavana Fanampiny, “Inona no Atao hoe Andro Fitsarana?”
Lasa manana fanantenana azo antoka isika, rehefa mamaky an’ireo tantaran’olona natsangana tamin’ny maty ao amin’ny Baiboly. —Jaona 11:39-44.
Tena maniry hanangana ny maty i Jehovah.—Joba 14:13-15.
Hatsangana daholo ny olona ao amin’ny fasana misy ny maty rehetra.—Jaona 5:28, 29.
Hizara Hizara Fanantenana Azo Antoka Momba An’ireo Havanao Efa Maty